Ibex 35 kwinkqubo yasemva kwexesha: kufuneka wenze ntoni? | Ezezimali
Ibex 35 kwinkqubo yasemva kwexesha: kufuneka wenze ntoni?
Akukho mathandabuzo ukuba isalathiso esikhethiweyo sezabelo zaseSpain, i-Ibex 35, ikwindlela esecaleni ekuye kwanzima ukuphuma kuyo kwezi nyanga zidlulileyo. Ihamba kumanqanaba abanzi kakhulu, phakathi kwamanqaku ayi-8200 kunye nama-9200 malunga. Ngokunyuka nokuhla kwexabiso ngokuxhomekeke kwizinto ezininzi eziguquguqukayo kwiimarike zezemali. Le nyaniso inesiphumo esiphambili sokuba kunzima kakhulu kuwe ukwenza isicwangciso sotyalo-mali. Zombini ukuthenga nokuthengisa, kunye nokusebenza, okuvula amathuba ekusebenzeni kwakho kwimarike yemasheya.
Le yinkqubo edinisayo yenxalenye elungileyo yabatyali mali abancinci nabaphakathi abangaziyo ukuba mabenze ntoni notyalo-mali lwabo. Kwaye sele zikho iinyanga ezininzi ukuba le meko iqhubeke, ngaphandle kokuba kubekho ikhefu ngandlela thile. Kwaye yintoni ebaluleke ngakumbi, nge ukuhamba okuncinci kumandla aphezulu, njengoko kwenzekile kulenyanga iphelileyo kaJanuwari. Apho ukunyuka kuyeke khona kanye kumanqanaba e-9200 yamanqaku.
Kwelinye icala, asinakulibala malunga nokubaluleka kokukhangela indlela yokuphuma kule nkqubo yokulingana ehamba ngoku. Kuba kude kube ngumzuzu enye okanye ezinye iindlela azichazwanga, zimbalwa kakhulu izicwangciso ezinokuthi zisebenzise abatyali mali abancinci nabaphakathi. Ngaphaya kokusebenza okuthe ngqo kunye nexabiso eliphantsi ngokubhekisele kwigalelo lezoqoqosho lweekhontrakthi ezenziwe.
1 Ibex 35: enegumbi elincinci lokuqhuba
2 Ibex 35 ijonge kumgangatho we-8.751
3 Unokwenza ntoni emva kwexesha?
4 Impendulo enobundlobongela ekuqaleni
5 Ishishini kwimarike yemasheya ngexesha le-2108
Ibex 35: enegumbi elincinci lokuqhuba
Ukusuka kule meko ngokubanzi, kuyinto eqhelekileyo ukuba ungakhululekanga ukwenza ukuba imali yakho ibeyinzuzo kwezi zihlandlo zikhethekileyo zeemarike zezabelo. Akunanto, izibonelelo ezinokubakho zilinganiselwe kakhulu okoko iintshukumo zinokubanakho ukuhlaziywa okufutshane kunangaphambili. Kungenxa yokuba enyanisweni, okwangoku kunzima kakhulu ukufumana umdla abawuqondayo ngamanani aphindwe kabini. Ngaphandle kothotho lwamaxabiso afanelekileyo ngaphakathi kwintengiso yesizwe eqhubekayo, kwaye oko kunokwenza ukuba ube neenzuzo ezinkulu kwimisebenzi eqhutywa kwiimarike zezemali.
Kwelinye icala, kwaye ngenxa yokungaqiniseki kweemarike zezabelo, abakho abatyali mali abambalwa abathe bajolisa kulondolozo lwabo iimveliso zebhanki zesiko njalo. Oko kukuthi, kwiidipozithi zexesha elimiselweyo, iiakhawunti ezinengeniso ephezulu kwaye kwezinye iimeko nkqu namanqaku ezithembiso zenkampani. Yindlela eqinisekileyo yokugcina ulondolozo lobomi bakho kwaye kule meko luhamba kunye nenzuzo encinci ethi nakweyiphi na imeko iphuculwe kwezi nyanga zidlulileyo. Ngayiphi na imeko, inye into eqiniseke kakhulu kwaye ezo ziinkampani ezincinci kunye nophakathi banexesha elinzima kakhulu lokwenza utyalomali lwabo ngoku.
Ibex 35 ijonge kumgangatho we-8.751
Elona nqaku libalaseleyo kwimihla yamva nje kukuba i-Ibex 35 sele ikufutshane kakhulu neenkxaso ezinamanqaku angama-8.500 XNUMX emva kokuphulukana nenxalenye enkulu yeenzuzo eziveliswe ngoJanuwari ophelileyo. Ngayiphi na imeko, ihlala ihambelana nomoya ophantsi weemarike zehlabathi. Enye yezinto eziphambili zokuhla kwesitokhwe esitsha kukupholisa umoya wothethathethwano phakathi I-China kunye ne-United States. Ewe kunjalo, zimbalwa kakhulu izizathu zokutyala imali kwimarike yemasheya ngalo mzuzu kanye, ngaphaya kokusebenza ngokukodwa.
Kuyinyani ukuba ayizizo zonke ezaziza kuba ziindaba ezimbi kwaye kule ndlela, kufanele ukuba kuqatshelwe ukuba idatha evela kuyo Ukuthumela ngaphakathi kunye nokungenisa eJamani bebenethemba ngakumbi kunokuba bekulindelwe. Nangona iseyinto encinci kakhulu efanelekileyo ukuze iibhegi ziqhubeke nokukhula ukusukela ngoku. Ngaphandle kokuphindaphinda okunengqiqo okwenzeka kwiimeko ezinje ngoku. Apho, kwintengiso yamatyala, ipremiyamu yomngcipheko waseSpain inyuka iye kufikelela kumanqaku asisiseko ayi-115,90. Isaphulelo esingazalisi abatyali mali abancinci nabaphakathi ngokuzithemba. Ukuba akunjalo, ngokuchaseneyo, kuhlwayela amathandabuzo kubo.
Unokwenza ntoni emva kwexesha?
Kule meko ikhethekileyo kwiimarike zamasheya kwihlabathi liphela inyani kukuba kukho abancinci abatyali mali abanokukwenza. Ngaba zimbalwa kakhulu izicwangciso ukwenza izicwangciso zakho eziphambili zotyalo-mali. Enye yezona zinto zibaluleke kakhulu kusekwe ekuthatheni inxaxheba kwimarike yemasheya yesinye sezabelo zaseSpain. Kuba ngale ndlela, awungekhe ulibale ukuba iimarike zezemali zihlala zivelisa amathuba okwenene eshishini. Okwangoku akukho sizathu sokuyeka ukuba yiyo. Ngokuqinisekileyo njengoko kwenzekile kwiminyaka enzima kakhulu kwimarike yemasheya.
Ngomnye umthambo, awungekhe ulibale ukuba ukuthatha isikhundla kwimarike yesitokhwe kunye neziqinisekiso ezithile zempumelelo ekusebenzeni, awuyi kuba nanto unokuyenza ngaphandle kokuvula izikhundla kwinxalenye esezantsi yejelo lecala esibhaptizwe kulo. Ngokufanelekileyo, ngeenxa zonke amanqaku angama-8200, nangona sisengozini enkulu yokuba le nkxaso ibalulekileyo inokuphazamiseka. Kwimeko apho, iziphumo ziya kuba mbi kakhulu kwizikhundla ezivulekileyo kuba unokwenza ilahleko enkulu kwipotifoliyo yakho yotyalo-mali. Nokuba sesichengeni sokuxhonywa kwixabiso leminyaka kunye neminyaka.
Impendulo enobundlobongela ekuqaleni
Ewe kunjalo, inye kuphela into eqinisekileyo, kwaye yindlela yokusabela kule meko iya kuba nobundlobongela. Ngengqiqo enye okanye enye, ngamandla amakhulu okubaleka okanye okusinda kwi-bearish ukuba kwimeko enjalo kuya kuvumela ukusebenza ukuba kwenziwe ngomda omkhulu wento. Kwakhona ukusuka kwizikhundla ze-bearish kuba uya kuba nakho ukwenza ikhontrakthi kwiimveliso zezemali ezithi zinciphe kwiimarike zezabelo. Umzekelo, Utyalomali mali, iimvume zokuthengisa okanye ukuthengisa ngetyala. Ngenzuzo enomdla kakhulu ukuba ezi meko zenzeka ekugqibeleni. Ngaphaya kokunye ukuqwalaselwa kobuchwephesha kwaye mhlawumbi nakwindawo yokujonga izinto ezisisiseko.
Kwelinye icala, kufanelekile ukuqaqambisa ngeli xesha langoku, neliza kubaluleke kakhulu. linda ixesha elithile de imeko icace kwiimarike zezabelo. Ewe, esi sicwangciso-qhinga siya kuba kufanelekile ukukhusela kunye nokugcina imali oyongele ngaphezulu kwezinye izinto ezinokuqwalaselwa zalo naluphi na uhlobo kunye nemeko. Kusenokufuneka ube kule meko kulo nyaka okanye nangaphezulu. Ngayiphi na imeko, le meko ibaluleke kakhulu esingakhange sihlangabezane nayo ixesha elide kwaye ibonakaliswa yinto yokuba kunzima kakhulu ukusebenza kwiimeko ezinje kubatyali mali abancinci nabaphakathi.
Ngale ndlela, enye yeendlela ezinokumelwa yi iimarike zengeniso esisigxina. Ayothusi into yokuba kwingeniso esisigxina, umthamo othengisiweyo kunyaka ophelileyo wawuyi-200.757 yezigidi zeerandi, ezimele i-45,1% ngaphezulu kunonyaka ophelileyo. Kwelinye icala, ikhontrakthi ngoDisemba inyuke ngama-38,4% xa kuthelekiswa nelo xesha linye lonyaka odlulileyo ngenxa yekhontrakthi yempahla zikarhulumente zesizwe nezamazwe aphesheya. Isicwangciso esijolise kubatyali mali abanesimo sokuzikhusela okanye sokugcina. Apho ukhuseleko lweemali ezinkulu ezityaliweyo zongamela ngaphezulu kokuqwalaselwa kwamabhongo. Le yinjongo kolu didi lweenketho kutyalo-mali kwimarike yemasheya.
Ishishini kwimarike yemasheya ngexesha le-2108
I-Spanish Stock Exchange ithengise ngayo ngeniso ekhoyo I-587.479 yezigidi ze-euro ngo-2018 emva kokubhalisa i-38.768 yezigidi ze-euro ngo-Disemba, ethi yona ibe yi-5,4% ngaphantsi ko-Novemba kunye ne-18,7% engaphantsi kwenyanga efanayo yonyaka ophelileyo. Inani lothethathethwano lwenyanga lalingu-3,1 yezigidi, i-15,8% yayingaphantsi kwenyanga ephelileyo kwaye i-5,7% yayingaphantsi kunoDisemba 2017. Ngamanye amagama, a ukuhla kwenani lokusebenza ngabatyalomali abajongane nenye yeyona minyaka inzima kakhulu kwiimarike zokulingana. Ngenxa yokungazinzi okubonakala ikakhulu emva kokuchitha iminyaka emininzi kungabonwa.
Nangona kunjalo, kwelinye icala, isimilo esihle uMARF anaso kulo msebenzi sitsalela ingqalelo. Kungenxa yokuba, isixa semicimbi emitsha ebandakanyiweyo yorhwebo kwi-MARF ngoDisemba ifikelele kwizigidi ezingama-671 zeerandi, nto leyo ebonisa ukwanda kwe-226% xa kuthelekiswa kwangexesha elifanayo kwi-2017. umthamo oqokelelweyo Ukuphela kwe-2018 yayiyi-6.357 yezigidi zeerandi, emva kokukhula nge-60,1% ngonyaka.
Umthamo obalaseleyo osasazwayo kule marike ufikelele kwi-3.320 yezigidi zeerandi, nto leyo ebonisa ukukhula kwe-46,9% ngonyaka. Kwelinye icala, njengenye yezona datha zibalaseleyo kwicandelo lotyalo-mali kwilizwe lethu. Njengendawo yokulwa nobuthathaka obonwe kwisalathiso esikhethiweyo sezabelo zamazwe. Ukungazinzi okuye kwavela ngakumbi emva kokuchitha iminyaka emininzi kungabonwa ziiarhente zezemali.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Ibex 35 kwinkqubo yasemva kwexesha: kufuneka wenze ntoni?
Indlela yabatyali zimali: bayithatha njani ingozi?
Yintoni umthamo wokugaya?